Zelensky: “Qofna ma saadaalin karo inta uu sii socon doono Duullaanka Ruushka nagu soo qaaday”. | dayniiile.com
Home WARKII Zelensky: “Qofna ma saadaalin karo inta uu sii socon doono Duullaanka Ruushka...
Zelensky: “Qofna ma saadaalin karo inta uu sii socon doono Duullaanka Ruushka nagu soo qaaday”.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in aanay jirin cid saadaal ka bixin karta muddada uu qaadan karo duullaanka Ruushka uu ku qaaday Dalkiisa 24kii Febaraayo 2022.
Zelensky ayaa hadalkaan ku sheegay fariinta uu dadkiisa la wadaago 24kii saacba mar si uu uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee duullaanka Ruushka, taageerada Dowladdiisa hesho, garab istaagga ay u baahan yahay iyo dhibaatooyinka ka dhasha dagaallada.
“Qofna ma saadaalin karo inta uu sii socon doono duullaanka Ruushka uu kusoo qaaday waddankeena, dabcan waxa ay taasi ku xiran tahay hadba sida aan isaga caabbino oo aan garab istaag hiil iyo hoolba u helno” ayuu yiri Madaxweynaha Ukraine.
Shacabka Ukraine waxa uu ku dhiirageliyay kaalinta ay ka qaadanayaan in ay difaacaan waddankooda, waxa uu ku tilmaamay “Halyeeyo Qaran” Taariikhda bog wanaagsan ka geli doonna sida uu hadalka u dhigay Madaxweyne Zelensky.
Ruushka, sababta uu u weeraray Ukraine ayaa ah in uu ka fogeynayo ku biirista NATO, caga-jugleyn waqtiyo kala duwan oo Moscow ku sameysay dhiggeeda Kyiv waxa uu dagaal toos ah dhexmaray labada Dowladood Febaraayo 2022.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Ukraine ka dalbaday in ay ka baaqsado ku buurista NATO Balse Xukuumadda Kyiv ayaa ganafka ku dhufatay dalabka Moscow iyada oo sheegtay in go’aankaas u madaxbannaan tahay.
Previous articleCiidanka dowladda oo dagaal kula wareegay degaanka Sangooye
Next articleGuddoonka baarlamaanka oo kulan ku saabsan Amniga doorashada la qaatay howlgalka ATMIS
The funeral of Palestinian journalist Abu Akleh is marred by Israeli...
Dowladda Somalia oo Amartay in la joojiyay Barnaamij doodeed loo qaban...
ahmed ali - May 15, 2022 0